Iwo akanakisa makoni embwa uye dzimwe nzira dzadzo | Imbwa Nyika
Makoni akanakisa embwa uye dzimwe nzira dzadzo
Imbwa makoni chishandiso chinobatsira uye chakakosha mushure mekunge imbwa yako yavhiyiwa, asi zvakare inorema uye haina kugadzikana kwavari sezvo, kunyangwe ichivadzivirira kubva kuruma nekukwenya maronda, vanovadzivirira kubva pakudya nekunwa zvakajairika.
Nokudaro, Muchinyorwa chino nezve akanakisa makoni embwa isu hatingotauri nezve akanakisa makoni aunogona kuwana pamusika, asiwo dzimwe nzira, zvinokatyamadza, izvo zvinogona kukubatsira kupfuudza ichi chinwiwa chakaipa uye kufambisa hupenyu hwechipfuwo chako. Mukuwedzera, isu tinokurudzirawo kuti iwe uverenge chinyorwa ichi nezve nzira yekurapa kutya murapi.
Havenfly Mhete ...
1 Koni yakanakisa yembwa
1.1 Elizabethan kora ine velcro
1.2 Inflatable collar
1.3 Recovery suit in black
1.4 Recovery vest
1.5 Classic plastiki cone
1.6 Inflatable koni ine tambo inogadziriswa
1.7 Yakanyanya kugadzikana nyoro collar
2 Unofanira kuuya nembwa yangu rinhi?
3 Mhando uye dzimwe nzira dzemakoni
3.1 Plastic koni
3.2 Soft cones
3.3 Inflatable koni
3.4 Recovery dress
4 Kupi kutenga macones embwa
Koni yakanakisa yembwa
Elizabethan kora ine velcro
Supet Cones ye ...
Imwe yeakanakisa imbwa makoni paAmazon iyi yemhando yepamusoro yakagadzirwa nePVC uye ine velcro. Zviri nyore kwazvo kupfeka, sezvo uchingofanira kuiisa pamutsipa wemhuka (rangarira kusiya nzvimbo yakakwana yekuti ifeme). Iyi modhi inoshingirira uye unogona kusarudza masaizi akati wandei, kuti uwane iyo inonyatsokodzera imbwa yako, tevera zviyero zviri patafura.
Mamwe mashoko anoratidza kuti ndizvo zvishoma uye kupfupika kune dzimwe imbwa. Vamwe, zvisinei, vanosimbisa kuti yakanyatsogadzikana uye kuti tambo yejira inovhara kumucheto inobatsira zvikuru kuitira kuti imbwa irege kuzvikuvadza.
YAMI Chishongo ...
Kana iwe uchida chimwe chinhu chakasiyana uye icho chakanyanya kugadzikana kune imbwa yako, inflatable koni isarudzo yakanaka. Izvi zvakafukidzwa nemucheka wakapfava uye, nekuwedzera, zvinofambisa zvakanyanya mafambiro embwa yako, sezvo zvichimubvumira kudya nekunwa zvakanaka. Mukuwedzera, inoputika uye inosvibisa zviri nyore, izvo zvinochengetedza nzvimbo kana zvasvika pakuchengetedza. Nekudaro, zvinofanirwa kurangarirwa kuti iyi modhi haishande nemhando dzese dzembwa, sezvo avo vane makumbo marefu uye mhuno (zvakadai seDobermans, Dalmatians ...) unogona kusvika nyore munzvimbo yaunoda kudzivirira. .
Recovery suit in black
Imwe sarudzo inonakidza yevaridzi vembwa vanonyanya kunetseka nemakoni. Kudzoreredza masutu seizvi anodzivirira nzvimbo, ringave ronda, suture, kana bhandeji, pasina kudzikisira chero kufamba kwembwa. Sarudza saizi zvakanaka kuitira kuti irege kudzvanya kana kuwandisa kana uchiisa sutu. Iyi modhi inogadzirwa nekotoni uye lycra, ichiita elastic uye kufema panguva imwe chete.
Imwe nzira yekoni yembwa, yakafanana neyakapfuura chigadzirwa. Sezvatakataura, zvinonyanya kufambisa kufamba kwembwa. Mukuwedzera, kana imbwa iripo, haizokwanisi kudya uye kunwa nyore nyore, asiwo kuzvisunungura, sezvo musana wake uri pachena. Iyi modhi yakasungwa uye ine denderedzwa yaunofanira kucheka kana imbwa yako iri hono.
Classic plastiki cone
Koni iyi yakangonaka, kunyangwe dzimwe nguva isu tisingade chimwe chinhu. Iyo yakachipa kwazvo (yakatenderedza € 7), zviri nyore kwazvo kupfeka uye ine koni yepurasitiki yakasungirirwa pamutsipa wemhuka ine velcro.. Micheto yakafukidzwa nemucheka kuitira kuti irege kukwesha. Dzimwe tsinhiro dzinoti, kana imbwa iine mhuno yakati rebei, koni haidzivise kusvika kwatisingadi.
Inflatable koni ine tambo inogadziriswa
Imwe yakanaka inflatable collar ndiyo iyi modhi iyo isingabatanidzi chete zvinhu zvakafanana nemamwe mitsipa yakafanana, senge jira rakapfava rinoifukidza kana kusununguka kwayo kwekuchengetedza, asiwo a. tambo inoshanda kugadzirisa kora kumusoro wembwa. Inowanikwa mumasayizi maviri, M uye L, uye inogona kucheneswa zviri nyore nekuti unogona kubvisa kavha yakavharwa.
Yakanyanya kugadzikana nyoro collar
James neSimbi Vese vana ...
Chekupedzisira, pamwe iyo yakagadzika collar pane iyo rondedzero (kunze kwekudzoreredza masutu, hongu) iyi squishy koni. Is yakagadzirwa nenylon, yakasungirirwa pahuro uye ine hunhu hwekuti inogona kudzikiswa zvachose.. Nemhaka yokuti yakapfava, imbwa inogona kurara kana kudya nokunwa zvakanaka mairi, sezvo yakaremara, kunyange zvazvo gare gare tichazofanira kuedza kuidzorera.
Unofanira kuuya nembwa yangu rinhi?
Pfeka koni, sezviri pachena hachisi chikonzero chekunaka kana kusarongeka, asi chinofanirwa kuratidzwa nachiremba wemhuka. Kazhinji, imbwa dzinofanira kupfeka koni muzviitiko zviviri:
Chekutanga, kana vakavhiyiwa. Koni inodzivirira imbwa kuti isakwenya paronda kana kudhonza kana kunanzva misono. Nokudaro, ronda rinoporesa zviri nani uye nekukurumidza uye njodzi yehutachiona inoderedzwa.
Chechipiri, vet inogona kukuudzawo izvozvo imbwa yako inofanira kupfeka koni kana iri kutevera marapirwo ayo inofanira kudzivisa kukwenya kana kuruma mune imwe nzvimbo.
Unozviona izvo Izvi zviitiko zviviri zvakakosha kune hutano hwembwa yako, saka kushandiswa kwayo kwakakosha kwakakosha kuitira kuti ichi chisingafadzi chiwedzere kuita basa rayo nemazvo.
Pamusoro pekushandisa veterinary, iyo koni inogonawo kushandiswa mune mamwe mamiriro, semuenzaniso, kana uchivaendesa kumugadziri webvudzi, kuti vadzivise kuruma chimwe chinhu chatisingadi kana kuvabata pasina kutya, kunyange iwe uchifanira kuyeuka kuti haina kugadzikana zvachose, saka hazvikurudzirwi kuishandisa zvisina tsarukano.
Mhando uye dzimwe nzira dzemakoni
Makoni embwa haasi iwo chete koni yehupenyu hwese yaunogona kuwana kune vet. Parizvino, kune akasiyana mamodheru uye sarudzo dzinogona kuve dzakasununguka kune imbwa yako, maererano nehunhu hwavo netsika.
Iyo yakajairika koni kazhinji mapurasitiki akajeka, aunogona kutenga pane chero vet. Hazvina kugadzikana, mukuwedzera, zvinowedzera uye kukanganisa ruzha, izvo zvinokanganisa zvakanyanya kunzwa kwembwa yako, kana kudzikamisa nzvimbo yake yekuona, saka anogona kutya zvakanyanya pakuipfeka, kana kusvika ajaira. Pamusoro pazvo, zvinoita kuti kufamba kwako kuve kwakaoma, zvichiita kuti zvikuomere kudya kana kunwa.
Soft cones Idzo inzira yakanaka kune yakaoma epurasitiki, sezvo ichiita kuti zvive nyore kuti imbwa iwane chikafu nekunwa. Mukuwedzera, ivo vanonyanya kusununguka kupfeka. Zvisinei, vanopawo rimwe dambudziko. Semuenzaniso, chaizvo nekuti inogadzirwa nezvinhu zvakapfava, dzimwe nguva rudzi urwu rwekoni inorasikirwa nechimiro chayo, iyo imbwa inogona kudzokera kumaronda.
Ivo vanoyeuchidza zvakanyanya nezve yakajairika inflatable cushion yekurara mundege. Kazhinji zvakafukidzwa nemucheka kuti zvive zvakasununguka kupfeka. Kufanana nemakoni akapfava, anoita kuti zvive nyore kuti imbwa idye nekunwa, kunyangwe dambudziko ravo rakakura ndere fragility: zviri nyore kuti imbwa iboore netsaona nekuibvisa, saka iwe unofanirwa kungwarira zvakanyanya kuti izvi zvisaite. zvinoitika.
Imwe nzira yakakwana kune makoni ndeyekupora madhirezi, ayo Zvinosanganisira izvo chaizvo, muchidimbu chehembe chinoiswa pambwa kuti isasvike paronda.. Ivo vakanyatsosununguka sezvo vachibvumira rusununguko rwakakwana rwekufamba, kunyangwe imbwa yako inogona kuremerwa kana isina kujaira kupfeka zvimedu zvembatya. Ita shuwa kutenga saizi isina kunyanyokura kana diki.
Kupi kutenga macones embwa
Kunyangwe ivo vasiri chinyorwa chinowanzoitika, rombo rakanaka tinogona kuwana makoni embwa zviri nyore, kunyangwe iwo anogara ari akawanda kana mashoma nzvimbo dzakanyanya. Pakati pezvakajairika, semuenzaniso:
Amazon, mambo wezvinhu zvisina tsarukano, anokuunzira koni yaunoda kumusuwo wemba yako kana waita kondirakiti yayo Prime sarudzo. Mukuwedzera, ine marudzi akasiyana-siyana, akadai se inflatables, zvinangwa kana masutu ekudzorera.
ari mashopu anehunyanzvi seTiendaAnimal kana Kiwoko vanewo makoni mashoma mustock yavo. Kunyange zvazvo vasina zvakawanda zvakasiyana-siyana seAmazon, hunhu hwavo hwakanaka chaizvo uye varipowo mumasikisi akati wandei kuitira kuti iwe ugone kusarudza iyo inonyatsokodzera imbwa yako.
Pakupedzisira, iyo veterinarians Ndidzo dzakanakisa nzvimbo dzekutenga macones embwa. Kunyangwe ivo vari ivo vanowanzove nemhando shoma, pasina kupokana ivo ndivo vanogona kupa mamwe mazano emunhu kune iwe uye chipfuyo chako.
Makoni embwa ane chinhu chimwe chete chakanaka: kuti vanojaira kutora mazuva mashoma. Zvisinei, zvakakosha kufunga nezvekunyaradza kwechipfuwo chedu, saka tinovimba kuti takakubatsira nekusarudza uku. Tiudze, imbwa yako yakambopfeka imbwa yako here? Unofungei nezvemhando idzi dzakasiyana? Ndeipi inokodzera chipfuyo chako zvakanyanya?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Makoni akanakisa embwa uye dzimwe nzira dzadzo
Imbwa dzakanakisa heti dzechando nezhizha